Miidhaa Gaaza nyaataan bilcheessan jalaa Of baraaruuf qaceelfama armaan gadii kanatti fayyadamu qabna. -
Miidhaa Gaaza nyaataan bilcheessan jalaa Of baraaruuf qaceelfama armaan gadii kanatti fayyadamu qabna.
Gaazni nyaata iittin bilcheeyfatan kuni yoo dhohee miidhaa guddaa namarraa fiduu dandeya.
Tanaafu wayta alaa dhuftu yoo shurufkaan Gaazaa sitti dhageyamte maal godhu qabda .?
1• Shurufkaa Gaazaa dhageyse
Jennaan ifaa shiduun
2• Shurufkaa Gaazaa dhageyse
3• Erga Fooddaalee babbante
Boda Gaaza Shurufkaawaa
Jiru san hidhuuf
Suuta ja’i .
4• Wayta Shurufkaa Gaazaa
Dhageyse sanitti tallaajaa
Ykn firiija jerjerte
5• Hamma shurufkaan Gaazaa
Mana keysaa qulqullaawutti
Jerjertee ifaa hin shidin.
: Hubachiisa :
Ka dhagaye kan hin dhageyiniif
Haa himu sher waliif godhaa.
Previous Bineensi Bineessuma!
Next MAMMAAKSA AFAAN OROMOO FI GITA AFAAN FARANJII